घरमै प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्नसकिन्छ, तर कसरी ? – गाउँपालिका
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष ०२, २०७४ समय: ८:४७:३४
चाहे योजनाबद्ध ढंगले होस् वा बिना योजना नै, गर्भ रहेरनरहेको कुरामा दम्पतीमा कौतुहलता हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रेग्नेन्सी टेस्ट गराइन्छ । यसैले गर्भ रहेकोरनरहेको छिनोफानो गर्छ । बजारमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट तथा केहि उपकरण उपलब्ध छ, गर्भ रहेरनरहेको जााच्न । यद्यपी कतिपय महिला प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न लाज मान्छन् । तिनै महिलाको लागि उपयोगी हुनसक्छ, यी घरेलु काइदा, जसबाट गर्भ रहेरनरहेको सहजै जााच्न सकिन्छ ।
के छ त वीधी ?
यस्तो प्रयोग भने तपाई बिहान उठ्नसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । चिनीबाट पनि यहि विधी अपनाएर गर्भ रहे र नरहेको परीक्षण गर्न सकिन्छ । चिनीमा थोरै पिसाब मिसाइदिने । केहि समयपछि चिनी घुलिनुको साटो डल्ला पर्न सक्छ । यदि त्यस्तो भयो भने तपाईमा गर्भ रहेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । यदि चिनी र पिसाब आपसमा घुल्छ भने तपाईमा गर्भ रहेको छैन ।
घरमा साबुनबाट पनि तपाई प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि साबुन र पिसाब कुनै डिस्पोजलमा मिसाउनुपर्छ । केहि समयपछि साबुनमा स(सना फोकाहरु बन्यो भने तपाई गर्भवती हुनुभयो ।